Uthini umthetho ngokwabiwa kwefa kwababobulili obufanayo ababeganene - Bayede News
IRussia isabisa ngokuziphindiselela kwabayihlokolozayo
UMthethosisekelo waseNingizimu Afrika uyakuvuma ukuganana nokuthandana kwabantu bobulili obufanayo kodwa kuningi okugcina sekushayisana kulobu budlelwano uma sekulandelwa ukusebenza komthetho ikakhulukazi ekwabiweni kwamafa.
Ecaleni likamufi uLaubscher NO v Duplan and others lowezi-2017 uCornelius wayeganene noDuplan bengamadoda bobabili.
Ngesikhathi sokulalelwa kodaba kwavela ukuthi ngokweSigaba 1(1) somthetho i-Intestate Succession Act 81 of 1987 kuthiwa: “Uma
umuntu edlule emhlabeni engazange alabe ifa lakhe, kodwa enomyeni noma unkosikazi, lowo nguye oyothola amafa.” Kwavela nasecaleni likaKolver NO and Others ngowezi-2007 lapho inkantolo yanquma ukuthi amagama athi “noma umlingani” kumele alandele lelo elithi “unkosikazi noma indoda” ngokulandela incazelo equkethwe eSigabeni 1 (1) somthetho.
ISigaba 1 somthetho iCivil Union Act sithi: “iCivil Union” ichaza ukuzibophezela ngokuthandana kwabantu ababili abaneminyaka eli-18 nangaphezulu ubudlelwano babo obubhaliswa njengomshado noma ukuhlalisana ngokulandela umthetho. Kuphinde futhi kuvele ukuthi iSigaba 1 somthetho ofanayo sithi: “iCivil Union Partner” sichaza umuntu enibambisene naye emshadweni noma enihlalisene naye ebudlelwaneni. Umthetho uthi umuntu enibambisene naye ebudlelwaneni uthathwa umthetho njengokhona empilweni yakho futhi awukho umthetho ombandlululayo kuhlanganisa iCommon Law neCivil Union Partner.
ULaubscher owayefake isicelo eNkantolo Enkulu wayecabanga ukuthi kuba ngumlingani ongaphansi kweCivil Union kuphela ongakwazi ukuthola amafa, kodwa uDupla wayemi kwelokuthi isinqumo esathathwa ecaleni likaGory simnika ilungelo lokuthatha lonke ifa.
INkantolo Enkulu esinqumweni sayo yathi iboshwe isinqumo secala likaGory, yanquma ukuthi uDuplan nguye onelungelo lefa. Uma sibuyela ecaleni likaGory elasetshenziswa njengesibonelo, owayefake isicelo kwabe kunguMnu uMark Gory owayethandana nomufi uMnu uHenry Harrison Brooks.
Ngesikhathi uBrooks edlula emhlabeni ngoMbasa wezi-2005 abazali bakhe baphakamisa igama likaMnu uGerhardus Kolver ukuba aqokwe uMaster weNkantolo Enkulu ePitoli ukuba kube nguye othatha amafa kamufi. Lokho kuzwakalanga kahle kuGory owafaka udaba eNkantolo Enkulu ePretoria ngoMfumfu wezi-2005. NgoNdasa wezi-2016 uMehluleli uHartzenberg wakhipha isinqumo
Izingane zivikelwa ngumthetho ngayo yonke indlela
esathi, ukushiywa kweSigaba 1(1) somthetho i-Intestate Succession Act, 81 of 1987 emuva kwegama elithi “esishade” noma elithi
“umlingani” kulabo abasuke befunge bagomela ukuthi ebudlelwaneni babo bayohlukaniswa ukufa bazibophezela nangokwesekana, kuyashayisana noMthethosisekelo waseNingizimu Afrika.
INkantolo yanquma ukuthi ofake isimangalo kanye nomufi uBrooks, ngesikhathi sokufa kwakhe babethandana ebudlelwaneni babantu bobulili obufanayo futhi babezibophezele nangokusizana.
INkantolo yakhipha isinqumo esavuna uBrooks. Leli cala beliyisibonelo nje uMehluleli alisebenzisa, kodwa uma sesibuyela ecaleni likaLaubscher esiqale ngalo, yena wabe esedlulisela icala eNkantolo YoMthethosisekelo ephonsela inselelo isinqumo seNkantolo Enkulu.
nguSabelo Mbatha Apr 23, 2021